धेरै चर्चा कमाएका ५ विशेष विवाह – Khabar Silo
धेरै चर्चा कमाएका ५ विशेष विवाह
Posted on July 13, 2020 Author khabar silo Comment(0)
हरेक विवाहमा बेहुला बेहुलीपछि तिनका जन्ती महत्वपुर्ण मानिन्छन् ।
विवाहमा आएका पाहुना र निम्तालुलाई जन्ती बनाई विवाहमा लाने चलन छ । यस्तोमा केहि विशेष ब्यक्तिको उपस्थिति विवाहमा भइदिए सो विवाह नै विशेष रहन्छ ।
अझ कसैको विवाहमा देवताहरु नै आए भने यो कति सौभाग्यको कुरा होला । शास्त्रमा यस्ता ५ विवाहरु छन् जहाँ देवताहरु हेर्न आएका थिए
१. शिव पार्वतीको विवाह
प्राय हरेक पुराणमा शिव पार्वतीको विवाहको चर्चा हुने गर्दछ । हुनत महादेवले सतीसँग पहिलो विवाह गरेका थिए । सतीका पिता दक्षप्रजापतिलाई विष्णुले छलमा राखि यस विवाह भएको थियो ।
पछि दक्ष प्रजापतिले महादेवको अपमान गरेका कारण सतीले यज्ञमा हाम फालेर आत्मदाह गरेकी थिइन् । महादेव सती वियोगमा तपस्यमा लिन भए । यता सती हिमालय पुत्रीका रुपमा जन्म लिन पुगिन् ।
महादेव तपस्यामा लिन भएपछि तारकासुरको आतंक मच्चियो । जसको वध गर्ने शक्ति केवल महादेव पुत्रमा हुने वरदान थियो । तसर्थ देवताहरुले शिवको विवाह पार्वतीसँग गर्न कामदेवको सहाराबाट शिवलाई ब्युझाए ।
त्यसको केहि समयपछि तिनै महादेव रुप शिव र पार्वतीको विवाह भयो । सोहि विवाहमा सम्पुर्ण देवताहरु उपस्थित भएको प्रसंग छ ।
२. राम सीताको विवाह
श्रीराम र सीताको विवाहलाई शिव पार्वतीको विवाहपछिको सबैभन्दा प्रसिद्ध विवाह भनिन्छ । यस विवाहमा त्रिदेव सहित सबै देवताहरुको उपस्थिति थियो ।
राम सीताको विवाह हेर्न त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर ब्राम्हण रुपमा आएका थिए । सीताका पिता राजा जनकले शिव धनुष तोड्नेसंग आफ्नो पुत्रीसंग विवाह गरिदिने शर्त राखेका थिए ।
जसअनुसार रामले धनुष तोडे र सीतासंग विवाह भयो । रामायण यस विवाहको सम्पुर्ण कुरा उल्लेख गरीएको छ । यहि विवाहमा सम्पुर्ण देवताहरु उपस्थित भई आर्शिवाद दिएको उल्लेख छ ।
३. विष्णु लक्ष्मी विवाह
राजा दक्षका भाई भृगु ऋषिकी पुत्री नै माता लक्ष्मी हुन् । उनको माताको नाम ख्याती हो । एक पटक देवी लक्ष्मीको स्वयम्वर आयोजना भयो । त्यसबेला देवी लक्ष्मीको मनमा विष्णु प्रति प्रेम थियो ।
यता बिष्णु परम् भक्त नारदमुनि पनि लक्ष्मीसँग विवाह गर्न चाहन्थे । जसका लागी नारदले बिष्णुसंग सुन्दर देखिन हरी रुप मागे । नारद हरि रुप लिएर स्वयंवरमा पुगे पनि देवी लक्ष्मीले विष्णुको गलामा बरमाला लगाइदिइन् ।
यहि वियोगमा नारद त्यहाँबाट निराश भएर फर्किए र बाटोमा जलाशयमा आफ्नो अनुहार हेरे । जहाँ उनको रुप श्रीबिष्णुको नभइ बाँदरको थियो । बिष्णुले नारदको चाह अनुसार हरी रुप दिए । हरिको एक अर्थ बिष्णु हुन्छ भने अर्काे बादँर हुन्छ । तब नारद बैकुण्ठ गई विष्णुलाई क्रोधित भई मनुष्यको रुपमा जन्म लिएर पृथ्वीमा जाने र स्त्रीको वियोग सहने श्राप दिए ।
त्यसैले बिष्णु र लक्ष्मीले राम र सिताको रुपमा जन्म लिई वियोग सहनु पर्याे । बिष्णु र लक्ष्मीको सोहि विवाहमा सम्पुर्ण देवताहरु उपस्थित भएका थिए ।
४. कृष्ण र रुक्मिणीको विवाह
कृष्ण र रुक्मिणीको विवाहमा समेत सम्पुर्ण देवताहरु उपस्थित भएको उल्लेख छ । श्रीमद्भागवत गीतामा कृष्ण रुक्मिणीको विवाह प्रसंग उल्लेख छ । भगवान श्रीकृष्णले सबैभन्दा पहिला रुक्मिणीसँग विवाह गरेका थिए ।
भागवत कथाको वाचनमा यी दुईको विवाहलाई सप्रसंग ब्याख्या गरिन्छ । कृष्ण र रुक्मिणीको विवाह प्रसँग भागवत पुराणमा शुकदेव र राजा परिक्षितबीचको संवादमा उल्लेख छ ।
५. गणेशजीको विवाह
महादेव पुत्र गणेशजीको विवाहमा समेत सम्पुर्ण देवताहरु उपस्थित भएको उल्लेख छ । ऋद्धि र सिद्धी नामक प्रजापति विश्वकर्माकी दुई छोरीसँग गणेशको विवाह भएको थियो ।
गणेशको सिद्धितर्फबाट क्षेम र ऋद्धिको तर्फबाट लाभ नामका दुई पुत्रको जन्म भएको थियो । हिन्दु धर्ममा यिनै दुई बालकलाई शुभलाभ मानिन्छ । गणेश ऋद्धि सिद्धीको विवाह हेर्न सम्पुर्ण देवताहरु उपस्थित भएको पुराणमा उल्लेख छ ।
Posted on August 4, 2020 August 4, 2020 Author khabar silo
आज मंगलबार भगवान गणेशको दर्शन आराधना गर्नाले सबै कार्य शिद्धि हुने शास्त्रीय मान्यता छ। बक्रतुण्ड महाकाय सूर्य कोटी समप्रभा । निर्विघ्नं कुरू मे देव सर्व – कार्येशु सर्वदा ।। करोडौं सूर्यको जस्तो तेज भएका भगवान गणेश देवलाई आराधना गर्नाले बिघ्न बाधा र अधुरा काम पूरा हुन्छन् । शास्त्रअनुसार मंगलबारको दिन गर्न केही काम गर्न बर्जित […]
Posted on September 20, 2020 September 20, 2020 Author khabar silo
हिन्दु धर्मका देवताहरू मध्य एक हुन्– सूर्य देव । धार्मिक मान्यता अनुसार आइतबार सूर्य देवको प्यारो दिन मानिन्छ । यस दिन सूर्य देवको उपासना गरे लाभ मिल्ने धार्मिक विश्वास गरिन्छ । सूर्य देवको विशेष दिन भएकाले धार्मिक मान्यता अनुसार आइतबार विशेष मानिन्छ । मनोकामना पूर्ण गर्न मनुष्यले सूर्यको उपासना गर्नुपर्ने सूर्य पुराणमा उल्लेख छ । […]
बिहान उठ्ने बित्तिकै गणेश भगवानको दर्शन गर्नुहोस र पढ्नुहोस नसोचेको धनलाभ हुनेछ ।
Posted on March 26, 2021 Author khabar silo
भगवान गणेश शुभलाभका भगवान हुनुहुन्छ । उहाँको स्मरणमात्रले हाम्रो जीवनमा धेरै सफलताहरु आउनेछन् । उहाँको स्मरण गर्ने मंगलबार उत्तम दिन हो । हामिले भगवान् गणेशलाई एकदन्त पनि भन्ने गर्छौ । यसको अर्थ हो एउटामात्र दाँत भएका । श्री गणेशको हात्तीको जस्तो अनुहार र दुई वटा दाँत हुन्छन् । मंगलबार भगवान गणेशको पुजा गर्नाले सबै सं […]